Ujeedka socdaalka Jeneral Odowaa ee Gedo xilli ay Jubaland qabto cabsi badan - Idman news
Beled-Xaawo (Caasimada Online) – Taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya Jeneraal Odowaa Yuussuf Raage oo mudooyinkii lasoo dhaafay ku sugnaa degmooyin ka tirsan gobolka Gedo ayaa maanta gaaray magaalada Garbahaarey ee xarunta gobolkaas.
Mas’uuliyiinta maamulka gobolka Gedo ayaa socdaalkaas ku macneeyay mid lagu xoojinayo dhismaha ciidamada milateriga Soomaaliya ee ka howlgala gobolka Gedo ee koonfurta Soomaaliya iyo sidoo kale dhiira gelinta ciidamada ay dowladu geysay gobolkaas.
Maamulka Jubbaland oo horay uga hadlay socdaalka Taliyaha milateriga uu ku tegay gobolka Gedo iyo ciidamada ay dowladda federaaku ku daabushay ayaa tallaabooyinkaas ku tilmaamay duullaan ay gobolkaas ku soo qaaday dowladda Soomaaliya.
Muddooyinkii dambe waxaa sii kordhayey walaaca ay qabaan shacabka ku nool degmooyinka gobalka Gedo, gaar ahaan degmada Ceel-waaq kadib markii ay cirka isku sii shareertay xiisadda u dhaxeysa ciidamada dowladda iyo kuwa Jubaland.
Ciidamadaas ayaa la sheegay inay dowladdu ku qabsa rabto degmada Ceel-waaq oo ay Jubbaland maamusho, waaxana dadka ku nool la soo deristay cabsi xoog leh.
Xildhibaan Bashiir Faaqid oo ka tirsan baarlamaanka Jubbaland, isla markaana laga soo doortay gobolka Gedo oo maalin ka hor ka hadlay arrintan ayaa yiri, “DF waxay soo daad gureysay ciidamo kale halkii ay aheyd in kuwa jooga ay qaado wixii ay ka faa’ido annaga yeysan waxba naga siinin.”
Xildhibaan Bashiir oo sii hadlaayey ayaa yiri, “Annaga waan diyaarsanahay cidna uma aaba yeeleyno waxaan diyaar u nahay inaa difaacno gobalka Gedo wixii dagaal ama dhibaato ahna mas’uuliyaddeeda Farmaajo ayaa qaadaya.”
Previous Sawirro: Madaxweyne Deni oo maanta si weyn loogu soo dhoweeyay Garowe
Next Kulan ugu horeeya ee golaha shacabka oo looga yeeray wasiir Goodax Barre iyo sababta oo la shaaciyey – RADIO KULMIYE:: 88.0 MHZ Mogadishu-Somalia
Muxuu MAREYKANKA ka yiri khilaafka guddiyada doorashada Soomaaliya?
Biden oo ku dhawaaqay xubno cusub oo ka mid noqonaya maamulkiisa – RADIO KULMIYE:: 88.0 MHZ Mogadishu-Somalia
Maxaa saakay ka cusub dagaalka ka socda Itoobiya – RADIO KULMIYE:: 88.0 MHZ Mogadishu-Somalia
Muxuu MAREYKANKA ka yiri khilaafka guddiyada doorashada Soomaaliya? November 24, 2020
Biden oo ku dhawaaqay xubno cusub oo ka mid noqonaya maamulkiisa – RADIO KULMIYE:: 88.0 MHZ Mogadishu-Somalia November 24, 2020
Maxaa saakay ka cusub dagaalka ka socda Itoobiya – RADIO KULMIYE:: 88.0 MHZ Mogadishu-Somalia November 24, 2020
Wasiir amniga xukuumadda, Xasan Xundubeey oo farriin culus u diray mucaaradka November 24, 2020
Khilaafka u dhaxeeya Mahdi Guuleed iyo Cabdi Xaashi oo gaaray meel sarre November 24, 2020
Total visitors : 15,281